Izinqamuleli zekhibhodi zeGnome-Shell | Kusuka kuLinux
Izinqamuleli zekhibhodi zeGnome-Shell
IGnome-Shell Imfashini, noma ngabe bekungenjalo, ukusetshenziswa kwayo ekusatshalalisweni okuningi kuzoba esikhathini esifushane kakhulu.
Njenganoma yiliphi ideski elihle, IGnome-Shell Ibuye inezinqamuleli zayo zekhibhodi futhi ezinye ezimangazayo kakhulu ezizosivumela ukuthi sikwazi ukuhamba phakathi kwefayela le- desk futhi i Uhlolojikelele (Imininingwane ejwayelekile, okungukuthi, umbono owutholayo lapho uchofoza Imisebenzi). Ngakho-ke ake sithathe ithuba lokwazi ezinye.
Ukhiye weWindows: Shintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza noma ama-desktops. Hlela amawindi avulekile ukuze uwabone wonke ku-Uhlolojikelele bese ukhetha eyodwa oyifunayo.
I-Alt + F1: Shintsha phakathi kokubuka konke nedeskithophu.
I-Alt + F2: Ukusebenza kwempilo yonke.
I-Alt + Tab: Shintsha phakathi kwezinhlelo usebenzisa iwindi le-pop-up.
I-Alt + Shift + Tab: Kuyafana nokwangaphambilini, kepha ngezinhlelo zokusebenza ezibuyela emuva.
I-Alt + [Ithebhu yokhiye ophansi]: Lapho senza le nhlanganisela, okufanayo kuyakhonjiswa kepha siyabona ukuthi yimaphi amawindi uhlelo lokusebenza ngalunye oluvulekile.
Ithebhu ye-Ctrl + Alt +: Vula iswishi yokungena.
Ctrl + Shift + Alt + R: Kuhle nje. Ngale nhlanganisela yokhiye singenza iScreencast yedeskithophu yethu. Siqala futhi siqede ngenhlanganisela efanayo.
Ctrl + Alt + Up / Down Arrows: Shintsha phakathi kwama-desktops (afana ne-Compiz).
I-Ctrl + Alt + Shift + Up / Down Arrow: Sihambisa iwindi lamanje kudeskithophu ehlukile.
Ikakhulukazi inketho yokwenza ifayela le- I-Screencast Kuyamangalisa .. Ungabona lezi zinqamuleli nencazelo yazo ku lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Izinqamuleli zekhibhodi zeGnome-Shell
»Ukhiye weWindows»? WTF!?
Impela, kuyefana nefulegi leWindows kumakhibhodi amaningi emhlabeni. Ku-Linux lo khiye waziwa nangokuthi iSuper noma iSuper L.
Yebo, ngiyazi, kepha kuzwakala sengathi leyo khiye ngekaGüindou $ (-.-). Kufanele bathole ikhibhodi nge-Tux noma i-OS-tan (¬¬), bazothengisa amakhophi amaningi.
Ibizwa ngokuthi ukhiye weSUPER, hhayi amawindi.
Ungaqali. Ubani owazi lo khiye ngaphandle kwethu njengoSuper? Yize ungathola izindatshana zobuchwepheshe kule bhulogi, ungakhohlwa ukuthi iningi lazo liqondiswe kubasebenzisi abasha noma kulabo abavela ku-Windows. Ngakho-ke ngiyabonga kakhulu ngokulungiswa, kepha unamathela kukhiye weWindows.
Iqiniso ukuthi ngangilithanda kakhulu iGnome-shell ngesikhathi engangihlola ngayo iFedora 15. Manje sengibuyile neMint futhi ngokuqinisekile ngizozama Ubuntu Ocelote ngesikhathi esifushane, kepha anginqikazi ukubuya neFedora 16 esezofika.
Ngale ndlela, angikaze ngiyibone ikhompyutha ene-Linux efakwe ngaphambili kufakwe eduze, ngabe kukhona owaziyo ukuthi ilogo yokhiye "super" ibukeka kanjani kulawo makhibhodi?
Eqinisweni, ngicabanga ukuthi iCanonical ithengisa ikhibhodi ngokhiye omkhulu we-Super isebenzisa ilogo ye-Ubuntu, kepha akekho omunye umuntu owake wacabanga ukuyifaka esikhundleni sayo.
i-cergio monastery kusho
windows iwindi ngesingisi okungukhiye wewindows i-logo impreo kulowo khiye ephesentini lekhibhodi ilogo ye-maicrosof ibeka ukuthi ngifuna ukuthi ibize kanjani ukhiye, kufana nokuthi ngifuna ukuthola elinye igama lokhiye; futhi isifiso sibizwa ngokuthi ñ ngoba kukhibhodi yesiNgisi leyo khiye ibhala uhlamvu ñ
Phendula esigodlweni sezindela i-cergio
I-Iceweasel 7.0.1 iyatholakala ku-Debian Testing